soehtut aung, Author at Toyota Aye and Sons
Author Archive for: soehtutag
You are here: Home / soehtut aung
About soehtut aung
Meanwhile lets just say that we are proud soehtut aung contributedawhooping9entries.
Entries by soehtut aung
Toyota ကားချစ်သူများအတွက် ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းနဲ့ထပ်မံ ပုံဖော်ထားသော Toyota Hiace 2019 model ကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ*** Toyota Hiace 2019 model ကို auto နှင့် manual ဂီယာ၂မျိုးဖြင့်မိတ်ဆက်ပေးထားပြီး diesel (1GD-FTV)engine အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ Engine power ကတော့ 2.8 L ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းလေးတွေကတော့ manual အတွက် USD (43,900) နှင့် auto အတွက် USD (44,900) ဖြစ်ပါတယ်။ Toyota Hiace 2019 model ကို ကနဦး ၁၅% ပေးချေပြီး ၅ နှစ်အရစ်ကျစနစ် နဲ့လည်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Toyota Hiace 2019 model ကို […]
Toyota Aye and Sons မှ ထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Brand New Model Innova ဒီဇိုင်းကာလာက အရောင်၆မျိုးနဲ့ ရရှိနိုင်ပြီး ရုပ်ထွက်ကောင်းမွန်လို့ လူအများကြားမှာ ထင်ရှားနေမှာပါ။ 2.0- liter ဓာတ်ဆီကားဖြစ်ပြီး ခုံတန်း ၃တန်းနဲ့ လူဦးရေ၈ယောက် တင်ဆန့်ပါတယ်။ အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံမှုအတွက် လေအိတ်7SRS Airbagsပါရှိခြင်း ကလေးငယ်များအတွက်ပါ Child restraint systemတို့ပါရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဘရိတ်စနစ်အတွက်ပါ Anti- lock Brake Systemပါ ပါရှိပါတယ် Innova ဈေးနှုန်းလေးကတော့ USD 35500 + ဝင်ငွေခွန် ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ အရစ်ကျ ဝယ်ယူလိုသူတွေအတွက်လည်း AYA၊ CB၊ Myanmar Citizen Bank တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားကာ အရစ်ကျဝယ်ယူလိုသူတွေအတွက်လည်း […]
Toyota Aye and Sons Roadshow ကို လာမယ့် မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များအတွက် ကား ချက်ချင်းဝယ်၊ချက်ချင်းရမယ့် အစီအစဉ်… အောက်တိုဘာလ(၂၀)ရက်နေ့နဲ့ (၂၁)ရက်နေ့ မြန်မာပလာဇာမှာ ကျင်းပမယ့် Roadshow လေးမှာဆိုရင် Innova ကားအပြင် Fortuner ၊ Avanza နဲ့ Vios ကားမော်ဒယ်များပါ ပါဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြပွဲရက်အတွင်း ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် ချက်ချင်းဝယ်တာနဲ့ ချက်ချင်းရမှာနော်! ဒါ့ကြောင့် Roadshow ကို လာရောက်လေ့လာရင်း မိမိစိတ်ကြိုက် ကားအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူလိုက်ပါ။
အားလုံးစောင့်မျှော်နေတယ့် TOYOTA SUV ကားအသစ်ကြီး Rush ကို အခုလာမယ့် ဇွန်လ 29/30 နှင့် ဇွန်လိုင် 1 ရက်နေ့ တွင် Myanmar Plaza ရှိ Promotion Area မှာမိတ်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကားနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် ဝယ်ယူနိုင်မည့် Hire Purchase/ Trade In စတယ့် အကြောင်းအရာများကို TOYOTA Aye & Sons ၏ ဝန်ထမ်းများမှ အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ TOYOTA ကားချစ်သူများကို လာရောက်လေ့လာဖို့ ကျွန်တော်တို့ TOYOTA Aye & Sons မှဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်TOYOTA Aye & Sons မှ ကားများကိုလည်း 20% Cash Down […]
TOYOTA ကား ချစ်သူတွေ အတွက် အသစ်စက်စက် ၇ယောက်စီး SUV အမျိုးအစားကားတစ်စီး ဖြစ်တယ့် RUSH Model ကားသစ်ကို TOYOTA Aye and Sons မှစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ လှပခန့်ညားသော SUV တစ်စီးရဲ့ ဒီဇိုင်းပုံစံ၊ အဆင့်မြင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနည်းပညာရပ်များဖြင့် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်များကို ထောက်ပံ့ပေးထားကာ ယုံကြည်မှုရှိစွာ မောင်းနှင်နိုင်စေမည်ဖြစ်ပြီး တက်ကြွလှုပ်ရှားနေသော ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံနှင့် အံကိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုပါက ကားတန်ဖိုး ကြမ်းခင်းဈေး USD 28500 နှင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး Hire Purchase ဖြင့် လည်း 20 % Downpayment နှင့်အတူ ၅ နှစ်အရစ်ကျငွေချေပြီး ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။ Rush ကားအကြောင်းကို အသိစိတ်သိရှိလိုပါက လာမည့် 29th June […]
TOYOTA ကားသစ်တွေကို စုံစုံလင်လင်ကြည့်ရူနိုင်ပြီး TOYOTA ကားသစ်တစ်စီးကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးသွားမယ့် Toyota Aye and Sons Road Show TOYOTA ကားသစ်တွေကို တစ်နေရာတည်းမှာစုံစုံလင်လင်ကြည့်ရူနိုင်မယ့် Toyota Aye and Sons Road Show ကို Mayလ (၄၊၅၊၆)ရက်နေ့ တွေမှာ Myanmar Plaza မှာ ပြုလုပ်သွားမှာပါ။TOYOTA ချစ်သူတွေအတွက် (၇) ယောက်စီး MPV အမျိုးအစား TOYOTA ကားသစ်တစ်စီးကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး အခြား TOYOTA ကားအမျိုးအစားများဖြစ်တဲ့ Vios, Camry, Fortuner, Landcrusier ကားများအပြင်လုပ်ငန်းသုံးအတွက်အထူးသင့်တော်တဲ့ Hiace Luxury, Hilux Revo Extra Cab, Hilux Revo Double Cab […]
Toyota Aye and Sons ရဲ့Customersများအတွက် နှစ်သစ်အကြိုအထူး Promotionအစီအစဉ် Toyota Aye and Sonsမှနှစ်သစ်အကြိုအထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ Aye and Sons မှာ March 12 မှ April 11 အတွင်းမည်သည့်ကားကိုမဆိုဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက်တစ်သိန်းခွဲတန်အခမဲ့ဆီဘောက်ချာကိုနှစ်သစ်အကြိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး။ ဒါ့အပြင် 4သိန်း မှ ၁၃သိန်းအထိတန်ဖိုးရှိ ဖုန်းဘေ(လ်)များကိုလည်းမဲဖောက်ပေးကာ နှစ်သစ်လက်ဆောင်အနေနဲ့ ပေးဦးမှာနော်။Toyota Aye and Sonsမှာ ကားဝယ်ပြီးရင် ကားအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆီအပြင် ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် ဖုန်းဘေလ်လည်းရဦးမှာဆိုတော့ နှစ်သစ်ကူးချိန်ခါအတွက် သွားလာရေးရော ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ပါ စိတ်ပူစရာမလိုပဲ အေးဆေးလန်းနိုင်ပြီနော်။ ဒါ့အပြင် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာမှ ၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ Toyota Aye and Sons မှာ ကားဝယ်ဖို့လာရောက်စုံစမ်းခဲ့တဲ့ လူကြီးမင်းတွေအနေနဲ့ Toyota Aye […]
Toyta Aye and Sons မှာ Corollaကားသစ်တွေအတွက် Super Clearance Salesနဲ့ April 5မှ ၃၀ရက်အတွင်း Limited Offerဖြစ်လို့ စိတ်ဝင်စားသူတွေအနေနဲ့ လိပ်စာ – ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ပုလဲကွန်ဒိုရှေ့  Toyota Aye and Sons ဖုန်းနံပါတ် – 09954400950, 09954502206, 01 400950 နဲ့ 01 502206ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Toyota Aye and Sons ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာ အသေးစိတ်ကို http://toyota-ayeandsons.com/ မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။